Waraana - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:20 18 Sadaasa 20214:20 18 Sadaasa 2021
Yeroo waraanaa namoota nagaa kan jedhaman eenyu fa'i?
Waggaa darbe yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa Naannoo Tigaraayitti jalqabe Ministirri Mummee Itoophiyaa, Raayyaan Ittisaa biyyattii ‘’nama nagaa tokkollee hin ajjeesne,’’ jedhanii turan.
...tti maxxanfame 14:44 5 Sadaasa 202114:44 5 Sadaasa 2021
Dhiyeessa meeshaa waraanaa Itoophiyaa keessaa 'humnoonni biyyoota alaa gahee qabu'
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii, humnoonni idil-addunyaa gahee daldala meeshaalee waraanaa qabaniin, waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuu danda'u jedhan.
...tti maxxanfame 4:20 7 Onkololeessa 20214:20 7 Onkololeessa 2021
'Hojiirra taanaan nama hin hamattu' - Aaddee Rihmat Ibraahim
Video caption: 'Hojiirra taanaan nama hin hamattu''Hojiirra taanaan nama hin hamattu'
'Hojiirra taanaan nama hin hamattu' - Aaddee Rihmati
...tti maxxanfame 4:40 28 Hagayya 20214:40 28 Hagayya 2021
Waggoota dhiyoon as xiyyaaronni nam-maleeyyii yookaan diroonoonni dirree waraanaa keessa hirmaachuun, madaallii humna lolaa jijjiiraa akka jiran ogeeyyiin ni kaasu.
...tti maxxanfame 3:44 7 Hagayya 20213:44 7 Hagayya 2021
Hidhattoonni Taalibaan kutaalee Afgaanistaan gara caalu qabatan
Waggoota dhiyoo as magaalaan Kibbabaha Afgaanistaan finciltoota Taalibaaniin to'atamtee akka jirtu qondaaltonni mootummaa biyyattii BBC'tti himan.
...tti maxxanfame 3:58 15 Adooleessa 20213:58 15 Adooleessa 2021
Daa’imman hidhatan waraana Tigraay keessa mul’achuun gaaffii kaase
Dhiyeenya kana miidiyaan biyya Ameerikaa New York Times gabaasa dhiyeesse keessatti suuraalee hedduu fayyadame keessaa tokko, ijoolleen umuriin isaanii xixiqqaafi loltummaaf hin geenye fakkaatan meeshaa waraanaa qabatanii wayita imalan kan mul'isu ture.
...tti maxxanfame 4:11 26 Ebla 20214:11 26 Ebla 2021
Duguuggaa sanyii jechuun maal, akkamiin hojiirra oola?
Duguuggaan sanyii yakka sarbama mirga namoomaa isa cimaa yoo ta'u, seenaa keessatti yakki kamtuu akka kana jedhamu irratti ammalleen falmsiisaadha.
...tti maxxanfame 5:01 3 Ebla 20215:01 3 Ebla 2021
'Oromiyaa keessatti haleellaa hidhattootaan kan miidhamaa jiru saba tokko qofa miti'
Naannoo Oromiyaa keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan dagachiisanii raawwataniin kan miidhamaa jiru saba tokko qofa miti jedhan Hoogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mahammad.
...tti maxxanfame 7:06 3 Bitooteessa 20217:06 3 Bitooteessa 2021
‘Kuni gatii nuti bilisummaaf kaffalle’
Waraanni Siiriyaa ganna kudhan lakkoofsise biyyattii diigee, lubbuu namoota kuma dhibbaan lakka’amanii galaafatee, namoota miliyoonatti lakka’aman immoo qe’eerraa buqqiseera.
...tti maxxanfame 5:36 2 Bitooteessa 20215:36 2 Bitooteessa 2021
Aduwaan injifannoo guddaa Bitootessa 1, bara 1896 galmaa'edha. Kibxatni har'aa waggaa 125ffaa isaati. Artist Darajjee Balaayineh gahee namoota ogummaa qabaniin gurra guddaa horatan waan isaan injifannoo Aduwaarratti barreessaniifi weeddisan kaasuun akkasiin seenesseera.
Page 1 Keessaa 7